ရွာ – စပ်မိစပ်ရာ ဘာညာကွိကွ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရွာ – စပ်မိစပ်ရာ ဘာညာကွိကွ
ရွာ – စပ်မိစပ်ရာ ဘာညာကွိကွ
ဒီ FB အကောင့်ထဲမှာ ၉၀% က ရွာသူရွာသားတွေ နဲ့ ၁၀% က တခြားသူတွေ ဆိုပေမယ့် ကိုယ်တွေပြောလွန်းလို့ Myanmargazette ဆိုတဲ့ ရွာကို သိပ် မစိမ်းလောက်ဘူးးထင်ပါရဲ့..!!
2012 Oct မှာ စရောက်တယ်.. Facebooker တစ်ယောက်မို့ တခြားဘလော့ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ လည်ဖို့ သိပ် အချိန် မပေးဖူးးရာကနေ ဘာက စွဲဆောင်မှန်းးမသိ ရွာမှာ နေပျော်သွားတယ်..!! ???
FB မှာတော့ တစ်ချို့ အပြင်လူတွေ အနေနဲ့
ရွာကသူ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ Personality, အပြောအဆို
ကိုယ့်အချင်းးချင်းး ပြောတတ်တဲ့ အထာတွေ,
ပြန်ပြေလည်သွားတတ်တဲ့ အနေအထားတွေမှာ နားလည်ချင်မှ နားလည်လိမ့်မယ်..
ရွာ က လူတွေ တမျိုးပဲ တို့ ဘာတွေမှန်းမသိဘူးးတို့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြမှာပေါ့…
ရွာသူရွာသားတွေ ဘာဂျီးမှန်းမသိဘူးလို့ ဝေဖန်တာတွေ ရှင်းမပြတတ်ပေမယ့် ရွာသူရွာသားတွေ အကြောင်းး ကိုယ်ပဲသိပြီးတာပဲ ဆိုပြီးး ဆိတ်ဆိတ်နေလိုက်တာပဲ..
ကိုယ်ကတော့ ရွာသူကြီးး Thakhin Kai Bwor က အစ,
အမျိုးအစုံတော်ထားရတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ အလယ်,
ကိုယ့်ကို ရန်သူ အဖြစ် သဘောထားသူတွေ အဆုံးး သူတို့ အရည်အချင်းတွေ တစ်မျိုးစီကို သိထားးတွေ့ထားပြီးမို့ တစ်မျိုးစီ ချစ်ရ အထင်ကြီးရပြန်တာရယ်…
မပြောမရှိနဲ့.. ရန်သူဖြစ်ရင်တောင် ကိုယ့်ရွာထဲ က လူမှ လက်ရည်တူတယ် မှတ်တာပဲ..
မှတ်ဉာဏ်ကောင်းတာက အစ ..
လက်စားခြေတတ်တာ အဆုံးး ပြန်တွေးရင် ချစ်စရာလို့ချည်းးမြင်ပြီးး ရယ်ရယ်မောမောပဲ စိတ်လျှော့လိုက်တာများတယ်.. ???
ရွာ မှာ နေဖူးမှ ကိုယ့် အတွက် အကျင့်ကောင်းတွေ တိုးတက်တာ အများကြီးးး
အကျင့်မကောင်းတွေလည်းး မနည်းဘူးး ပွားးလာတာ…
စာ ကို စေ့ငုအောင် သေချာဖတ်ရတယ်, ဆိုလိုရင်းကို နားလည်မှ ကော်မန့်ပေးဖို့ ရဲတယ်..
မသိတာဆို ဒီတိုင်းကျော်မသွားဖြစ်ပဲ စာတွေ ရှာဖတ်ရတယ်.. အသုံးလိုတာ သိမ်းရတယ်..
ပို့စ်တင်ဖတ်ပြီးးရုံမရ မန့်တွေပါ သေချာလိုက်ဖတ်, ရီပလိုင်းတွေပါသေချာဖတ်တဲ့ အကျင့် FB မှာ အထိပါလာတယ်…
ကိုယ့်ဘက်က မသေချာရင် မခိုင်လုံရင် မငြင်းရဲဘူးးး .. ပြန်အုပ်မယ့် ဆရာတွေချည်းးပဲ..
လူစည်တာ မစည်တာ အမနာပ ရွာကိုပြောတာလည်းး သည်းခံရသလို ကိုယ့်အကြောင်း မကောင်းပြောတာ အတင်းပြောတာကြားးလည်းး ထုံပေပေနေတတ်သွားရော..
လူကြီးတွေဆီက သည်းခံတတ်တာနဲ့ နားလည်တတ်တာ ကို အတုယူခဲ့ရသလို..
အငယ်တွေဆီက ထက်မြက်တာနဲ့ မဟုတ်မခံစိတ်လေးတွေကို အားကျခဲ့ရတယ်…
ကိုယ့်အချင်းချင်းသာသိတဲ့ ကောမန့်မျိုးး FB မှာ မန့်ရင် လူမုန်းများမစိုးလို့ ထိန်းရပြန်ရော…
ဥပမာ- ကိုစွယ်တော့် မန့်တွေဆို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ကျော်လောက်က မန့်တစ်ခု ကို refer လုပ်တတ်တာမျိုးးပေါ့.. ဥပေါ်ဦးလို ဆားနဲ့ပါဘုရားး လို့ လူတိုင်း မသိနိုင်ဘူးးလေ..
(ဥပမာ လို့ ပေါဒါနော် ???)
ရွာထဲလူတွေထဲကတောင် ရွာ အထာနားမလည်တာတွေ အများကြီးမို့ အပြင်လူ က နားလည်ပေးဖို့ မျှော်လင့်လို့ မရစကောင်းးဘူးးလေ..
ရွာအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်တစ်ချို့ ပြောပြတာပါ.. ပြန်လာဖို့ ခေါ်တာ မဟုတ်တာမို့ ရွာကို ဘာလို့ မဝင်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း တို့ …. ရွာကို အပြစ်တင်တဲ့ အကြောင်းတို့ မပြောရင် ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ???
ကိုယ်ကတော့ တဂျီးကို အမြင်ကပ်တဲ့ အချိန်တောင် ရွာက မခွဲနိုင်သူမို့ ဆက်နေအူးးမှာပါ…
Comments – အမှတ်တရ ပြောဖြစ်တာလေးတွေ
Swal Taw Ywet ကျုပ်ကတော့ ရွာသားးးမှ ညံ့ခွင့်မရှိတော့လို့ကို မူချ ကြွေးကြော် နေတဲ့သူပ။
ဇီဇိလေး အဒေါ်နဲ့အတူ အမြဲရှိနေမယ်နော်။ ခု ခိ ေိ ခု။
ခင် ဇော် မှတ်ဉာဏ်ကောင်းပြီး Refer လုပ်နိုင်စွမ်းကို စံတင်ပေမယ့် ဇွတ်ပြောတာလေးး လျှော့ မှ ဒေါ်လေးးနဲ့ သဘောတူမဲ ??
Swal Taw Ywet ဇွတ်ပြောတယ်??
ရွာအပြင်ကလူတွေ ပါ ပါလာလို့
မိတ်ဖွဲ့ပေးရဲလို့လားးး လို့ အရင်မေးချင်သေးးးး။
ခင် ဇော် ဟိ.. လျှော့နေမှန်းးသိပါတယ်.. တမင်ရန်စတာ.. အချိန်ကိုက်ပြန်လာရင် မိတ်ဖွဲ့ပေးးမယ် ??
Myo Myo စကားအတင်းစပ်
ဒီနိုဝင်ဘာ ခွင့်ကအပြန် စလုံးဝင်လည်ဘို့ကိစ္စ
Visa free ကာလ ရှေ့နှစ်သို့ ရွှေ့မည်ဖြစ်ပါကြောင်းးးး။
Shwe Kyi အရာရာကို ချင့်ချိန်စဉ်းစားတတ်လာတာ ရွာကြောင့်ဆို မမှားဘူး ဘက်စုံထောင့်စုံက အမြင်တွေကို ရွာမှာမြင်ရတွေ့ခဲ့ရတော့ အောက်ခြေလူတန်းစား တောနယ်ကတက်လာတဲ့ စမီးအမြင်ကျယ်လာခဲ့တယ် ရွာကိုတော့ သံယောဇဉ်ရှိဆဲ မဝင်တော့ မဝင်ဖြစ်တော့ဘူး ပြောရင်း အရီးကိုလွမ်းတယ် ?
ခင် ဇော် သူများး အတွေးကို သုံးသပ်တတ်လာသလို့ အရေးးအသားးတွေကတဆင့် စိတ်လေးးတွေ ကို မှန်းဆမိပြန်ရော ☺️☺️
Pan Pan ပေးကလန်ရောပဲ မဝင်တာနှစ်ပေါက်နေပီ
ကြားထဲ တစ်ခါနှစ်ခါလောက် ဝင်ဖတ်ရုံရယ်
Kaung Kin Pyar စမီးလဲ လိမ်လိမ်မာမာ နေနေဘာဘီ…
အရင်လို စိတ်ရှိသလောက် မဆိုးတော့ပါပုစ့်…???
မမဂျီးရော ဆရာစွယ်တော်ရောရဲ့ ရွာသံယောဇဉ်ကို မြင်ရတယ်… ???
ရွာက သင်ပေးခဲ့တာတွေ အများကြီးပဲ…
ယူသော် ရ၏ ပါ… ???
ခင် ဇော် စမီး ကို ကျ ဘာကို ချစ်သွားတုန်းးဆို
ပါးနပ်ထက်မြက်ပေမယ့် မရိုင်းးဘူးး ယဉ်ကျေးတာ ကို မြင်လိုက်လို့ ??
ဟုတ်တယ်.. ယူသော်ရ၏ စိတ် မထားးနိုင်ရင်ကျ မဝင်တာကောင်းးပြန်ရော.. စိတ်တိုစရာချည်းးပဲ မြင်ရမှာ ??
Kaung Kin Pyar ကျေးကျေး…
မမဂျီးဆီကတော့ ပညာအစုံရလို့၊ တော်တာကို ချစ်တယ်…
ခင် ဇော် ဥနွေဥ ဆွာ ရွာလမ်းတလျောက် ဘောင်းဘောင်းမပါပဲ ပြေးနေသူ.. အမြင်မတော်သူ ဝတ်ပေးးလိုက်ပါလို့ သူ က ပြောထားးတာပဲ ??
Padonmar သူကတော့ သူ့သားတွေလွှတ်လိုက်တာလို့ ပြောတာပဲ။
Taw Twin Pyaw ရွာထဲမှာ အဆင် ့ဆိုတာမရှိပါဘူးဗျာ ..
ကျနော်လည်း စာရေးချင်လို့မရေးတတ်ဘဲနဲ ့
ရွာထဲကို ဘယ်သူ ့ကိုမှ နှုတ်ဆက်မနေပဲ ဝင်ရေးချလိုက်တာ။ ရွာထဲက အရင်လူတွေက နွေးနွေးထွေးထွေးဝိုင်းကြိုဆိုကြလို့ရွာသားတစ်ယောက်လို့ကိုယ် ့ကိုကိုယ်အတင်းခံယူလိုက်တယ်။
စာရေးဆရာရယ်လို့ဘယ်သူမှလည်း မခံယူကြပါဘူး။
ခင် ဇော် ဟုတ်ပါ့.. ကိုတော ပြောသလို ပါ့ တစ်ယောက် ဇ တစ်မျိုးးစီနဲ့ သန်ရာ သန်ရာ သွားနေကြတာာ ??
အာ့ဒါ က ဂိုဏ်းးပါ ရှိတယ် နော့ဗျာာာ ??
Taw Twin Pyaw ဒီ ဂိုဏ်းက အင်အားအကြီးဆုံးနဲ့အခိုင်မာဆုံး
Swal Taw Ywet အော်မေ့ ဂိုဏ်းး
Padonmar အီးဇီးကွတ် ရမ်းသန်းကွတ် လောက်ဇီးကွတ် ဘာလာလာကွတ် ဂိုဏ်း ။ ဂေါက်ကလပ် ။
Tun Tun Win နှာဂိုဏ်းချုပ်
ခင် ဇော် ဂိုဏ်းချုပ်က မိဂီ ခည ??
Taw Twin Pyaw ဒါတောင် ကိုကြောင်ကြီးက အလုပ်သင်အဆင် ့ပဲရှိသေးတာ ဟင်း ဟင်း
Alinsett မနေ့ကပဲ ကိုယ့်ကို လာပြောသွားတာက ”မင်းတို့ရွာထဲက လူတွေက တခြားလူတွေနဲ့မတူဘူးတဲ့။ ထူးခြားတယ်တဲ့။ မင်းလည်း တူတူပဲတဲ့။” ကိုယ်တွေကပဲ တခြားသူတွေထက် ထူးပြီး နဖူးမှာ အဟွှာပေါက်နေသလိုလို။ (အဟွှာ=တတိယမျက်လုံး = ဤဂါး စကားချပ်) ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော တောက တက်လာပြီး အင်တာနက်ဆိုတာကို စတင်မြည်းစမ်းတတ်ကာစ ချာတိတ်တစ်ယောက်ကနေ အဆဲလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိလာ. . .ချီးမွမ်းစကားလည်း ပြုံးပြီးနားထောက်တတ်လာ။ အငြင်းလည်း သန်တတ်လာ။ အတွေးအခေါ်တွေလည်း ပြောင်းလဲသင့်သလောက် ပြောင်းလဲလာတဲ့ ချာတိတ်ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာတာ ရွာထဲ ရောက်ခဲ့လို့ပါ။ ဒါမယ့် ဒီနေ့ ဒီအချိနိ ခံယူထားတဲ့ စိတ်ကတော့ မောင်သူရဆိုတာ မြန်မာ့ဂဇက် ရွာသားသက်သက် မဟုတ်ပါဘူးလို့။ ဗမာပြည်ထဲက ဗမာပြည်သူတစ်ယောက်ပါပဲလို့။ အဲ့ဒါကို မင်းက ရွာထဲကကောင်ပဲဆိုပြီး သီးသန့်တံဆိပ်ကြီး လာလာကပ်ပြီး ဘလိုင်းကြီး တက်ခွပ်တဲ့ ကြက်တွေ တွေ့ရင် ရိုက်သတ် ချက်စားချင်စ်တ်တွေ တဖွာဖွား တမေမေ ပေါ်လာရော။
ခင် ဇော် သူရို့ဆီမယ် တံဆိပ်တုံးးတေ အများးဂျီးး သလားးး
တစ်တုံးး မဟုတ် တစ်တုံးးနဲ့ တွေ့မှာ… အဲတော့ ဟာသ ပဲ သဘောထားးတော့တယ်.. ဟိ..
Alinsett အဲ့လို အရေထူသွားအောင်လည်း ရွာထဲရောက်မှ အကျင့်ရတာ။ အဲ အစကတော့ အရေထူချင်ယောင် ဆောင်မိသေးတယ်။ အခုကတော့ လာစမ်း။ အရေ ထူယောင် ဆောင်စရာကို မလိုတော့ဘူး။
ခင် ဇော် အေးးဆို.. ထူချင်ယောင်ဆောင်ကာလတုန်း ကတော့ ယားးကျိကျိပေါ့.. ဂုဒေါ့ နူတွားးဘီ ??
မှတ်မိလားး နိ အနူပို့စ်လေ.. ရီရတာ ဘိုက်ပါနာတယ် ??
Alinsett နှာကျ်ိုးတွေချည်း ပါဆို. . .
Char Too ယွာဒဇိတ်ကပ်မှာပေါ့ ငဒို့ကယွာရုပ်ပေါက်လို့ထင်ဒယ် အဲ့ထဲမယ် စင်ဂဘူကအိုညည်းက ဒဂဲ့ယွာရုပ်အပေါက်ဇုံးနေမှာ
ခင် ဇော် ရွာ ရုပ်ပေါက်တာလည်းမပြောနဲ့.. အပြောအဆို အစားးအသောက်ကအစ ရွာနေရွာစားး လေ.. ???
Swal Taw Ywet ဒုံ ဒုံးးး ရယ်
ခင် ဇော် တညားးတို့ က တောသူပြောလည်းးမနာ
အညာသူ ပြောလည်းး နာတတ်ဘူးး .. ဟိ ??
Char Too အရေထူဒါ အရေထူဒါ
ခင် ဇော် တကယ် ဟုတ်နာ ဆိုတော့ နာရင် ကိုယ်က နပေါဂျိ ဖစ်မှာပေါ့ ???
Alinsett တော်ရုံ ပြောတာလောက်တော့ နာစရာလို့ကို မမြင်တတ်တော့တာ။ ၆ကျပ် မရှိတာလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ၆ကျပ်ကွဲမှာကတော့ ကြောက်သေးတာပဲ။
ခင် ဇော် နိ ၆ ကျပ်ကွဲရင် နာ့ကို ၃ ကျပ်ပေးးနော် ??
Nway Oo အဲ ခြောက်ကျပ် ကွဲလို ၆စေ့လေး ထွက်လာရင် မြေရှိတဲ့လူ စိုက်ဖို့.ပေးပါအေ.. ကျုပ်က မြေမဲ့ယာမဲ့မို့..
Thakhin Kai Bwor (အနည်းဆုံး) တခြားသူတွေနဲ့မတူတာက.. ရွာသူားတွေက အစေ့တွေတောင်းခွင့်ရှိတယ်လေ..။
နောင်၁ဝနှစ်လောက်ဆို.. မြန်မာပြည်မယ်မရှိဖူးတဲ့ အပင်မျိုးဆက်တွေရဲ့ ဖခင်မိခင်တွေ အနည်းဆုံးဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပဲ..။
အခုညနေ.. သဘာဝတရားရိပ်သာဆရာတော့်တရားပွဲမှာ မုန့်ဟင်းခါးသွားစားပြီး ပြန်လာတယ်..။
မနက်ဖြန်မှာ ဆရာတော်နဲ့အင်တာဗျုးဖို့ချိန်းထားတယ်..။ ဘာတွေမေးချင်သိချင်ကြသလဲ…။
ခင် ဇော် ဟင့်အင်းး သဂျီးးမေးးတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြေရမယ့် ဆြာတော့် ကို အားးနာလို့ ထပ်မမေးးတော့ဘူးးး ??
Alinsett သူကြီး ဘာတွေ မေးသလဲဆိုတာ သိချင်လို့ မေးပြီးရင်သာ မြန်မြန် ရှဲပေးပါလို့
Thakhin Kai Bwor လူမှုရေးကောင်းမွန်တာတွေလုပ်နေတဲ့ဆရာတော်ကို ဘာသာရေးကိစ္စတွေမမေးဘူးလို့ တွေးထားတယ်..။
ခင် ဇော် ဟုတ်တယ်.. နောက်ပြီးး ဆရာတော်က အနေအထိုင် ကျစ်လျစ်လို့ ကြည်ညိုတယ်.. ??????
Swal Taw Ywet သံလျင်သဘာဝတရားရိပ်သာနားက စေတနာရပ်ကွက်ဆိုလား။
ကိုယ်နိုင်သလောက်ငွေလေးနဲ့ မြေဝယ်အိမ်ဆောက် နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာရဲ့
ရေဆိုးမြောင်းနဲ့ မိလ္လာစနစ် စနစ်ကျအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလည်း သိလိုပါကြောင်းးး။
Moon Poem Yt ရွာထဲမှာ မခိုင်ဇာဆိုတဲ့ နာမည်ကို ရင်းနှီးနေပြီး မချွိက နာမည်ကို ခင်ဇော်ပြောင်းခါစမှာ သူစိမ်းထင်ပြီး ဒီမယ် ကိုခင်ဇော်ဘာညာနဲ့ လာစွာတာလေ ခွိခွိ
ခင် ဇော် အဟီးးဟီးးး
ဘယ်ပို့လည်းးမသိ ပြန်ရှာအူးးမှ ??
တစ်ချို့ ကိုကျ ဇီဇီ ခင်ဇော်ဆိုတာ နီနီခင်ဇော့် အူးးလေးးလို့ ကြပ်လွှတ်တာာာ ?
Maung R Ga ကျူပ်ကတော့ မားပုကိုချစ်သလောက် ကြောင်ကြီး ကို အသေမုန်း ဒယ်။ ဗျဲ မမဆွီ တော့ အချစ်ဆုံး တစ်နှစ်တစ်ခါdblack သောက်ရလို့။ အဲ့ ကြုံတုံးပြောရရင် ဒီနှစ်မသောက်ရဘူး။
Char Too ဒါစို ဒီနှစ်မချစ်တော့ဘူး အချစ်ရပ်ထားတယ်ပေါ့
ခင် ဇော် အေ့လေ.. သူချစ်တာ ပုလင်းကြီးးကိုးးး ??
Maung R Ga အကြောင်းကြောင့် နားလည်မှု လွဲသွားတာပါ
ပုလင်ဂိုလဲ ချစ် မဆီ်ွ ကိုလည်းချစ်။
Nyein Nyein Thaw လူငယ်တွေကိုလဲ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံတတ်တာ ရွာထဲက ရွာသူားတွေရဲ့ လေးစားစရာအချက်တွေထဲက တစ်ခုပါ။ အဲ့ဒါကို အရမ်းသဘောကျတယ်။ ကိုယ်တွေက ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် နေရာပေးတယ်၊ အားပေးတယ်။ မျှဝေပေးကြတယ်လေ … ^_^
ခင် ဇော် ဟုတ်ပါ့.. သူတို့ အကြိုဆိုနေရာအပေးးကောင်းးလို့ရွာမှာ ဆက်မြဲနေတာာ ??
Nyein Nyein Thaw ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်။ :*
Swal Taw Ywet နောက်လူတွေ ဝင်လို့ကိုမရဘူးဖြစ်နေတယ်။
တပည့်လေးအတွက် ဒီကနေ ရွာဝင်ခွင့်လျောက်တာ
သင့်Email သို့ ရွာအဝင် PW ပို့ပေးပါမည်ဆိုပြီး ရပ်နေလေရဲ့။
Email ထဲလဲ ဘာမှရောက်မလာ။
Etone ဘီယာနဲ့ခေါင်းလျော်လို့ရတဲ့အကြောင်း ပို့စ်ထဲပါပီးကတည်းက စသတိထားမိတာ
ခင် ဇော် အာ့ဒါ က ဒု လားး တတိယ လားး မသိဘူးး ဟီးးး
အမ စစချင်းး စီတုန်းးနဲ့ အိတုန် မှားးနေတာ ??
နန်းတော်ရာသူ မွဆွိက ၁၀၁၂ဆို သော်နဲ့အတူတူပဲ။ဘာလို့ ကြယ်တွေပိုများနေတာလဲ။? ?
ခင် ဇော် ကြယ်က Best comment အစိမ်းးပေးးခံရတာ များးမှ တိုးးတာလေ.. သော် က မမန့်ဖြစ်လို့ ထင်တယ်..
နန်းတော်ရာသူ သော်က Sign up မလုပ်ပဲ သတင်းတွေဝင်ယူနေတာ ၂၀၁ဝတည်းက။တခြားဆိုဒ်မှာတင်တာ ခရတ်ဒစ်ပေးပါတယ်။အဲ့တုန်းက သဂျီးက ဒီသဂျီးမဟုတ်သေးဘူးထင်ရ။
Kaung Kin Pyar ခုနောက်ပိုင်းရွာကြီး အတော်ခြောက်ကပ်လာတယ်…
ခင် ဇော် ဒီစကားးကြားးရင် ကြိတ်ပျော်သူတွေ ရှိလို့ ထုတ်မပြောဘူးးနေတာာ ??
Kaung Kin Pyar လင်း ထက် တစ်ယောက်ကတော့.. သူရို့ဆီ ရွာအဝင် အဆင်မပြေလို့ပါတဲ့….
ဒါနက် ဒီပိုစ့် ရှဲမယ်ညှော်.. မမဂျီးးး
ဂျက်စပဲရိုး ရွာထဲ ဆောင်းပါးလေးတွေ စာတိုပေစလေးတွေ ဝင်ဖတ်
နောက်များကျတော့ ဒါတ်ဆြာတွေ ရေးတာလေးတွေ ဝင်ဖတ်
ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးငြင်းကြတာတွေ ဖတ် နဲ့…
နောက်ပိုင်း ရုပ်ရှင်အကြောင်း လူတွေ အကြောင်းတွေ ဖတ်
တဖတ်ထဲ ကို ဖတ်ဖြစ်နေတော့တာကိုး…
ခင် ဇော် Draft ထဲမှာ ရေးးပြီးးတော့ တင်လည်းး မတင်ဘူးး ??
ဂျက်စပဲရိုး မေ့တောင် နေပြီ ဟီးဟီး
မာမီ့ ပန်းပုံတွေ တင်ပြီးပလားလို့ရယ်…
ခင် ဇော် Draft ထဲမှာ တွေ့တယ် .. နောက် တစ်ခု .. နာ သုံးးလိုက်ပြီလားးတောင် မသိ ???
Naw Crystalline ရွာထဲမဝင်ဖြစ်တာကြာပေါ့… မင်ဘာစဝင်ဖြစ်တာ ပန်းတနော်ဆေးရုံအလှူနောက်ပိုင်းပဲ.. အဲ့အချိန်ထဲက ဓာတ်ပုံတွေထဲကလူတွေရင်းနှီးနေခဲ့တော့ အပြင်မှာ မမြင်ဖူးပေးမယ့် တကယ့် ကိုယ့်မိတ်ရင်းတွေလိုဖြစ်နေတာ.. .. စင်ကာပူသူ/သားတွေကိုလည်း မှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိပါ့.. ကခင်ဇော်နဲ့ သူ့အစ်ကိုကြီး.. ????နောက်တျောက်.သူ့အစ်မ.? ရွာပုံမှန်ဝင်ဖြစ်ချိန်ကတည်းက ပျောက်သွားတဲ့မမိုချို… ပါးချိုင့်လေးနဲ့မမလှလှလဲ့လဲ့ကြည်..ဟို မျက်တောင်တုအကြောင်းရေးဖူးတဲ့တျောက်.. နာမည်မေ့ပြီ.. ဆုတော့ပါလားပဲ.သူလည်း.စာရေးကောင်းတယ်..ရခိုင်ဖက်က.. နောက်တော့… နာပြောတာ ဘယ်တွေရောက်ကုန်ပလဲ.. ???
ခင် ဇော် နိ မှတ်မိတာ စလုံး က လူတွေချည်းးပဲ .. ဘာဒေလားးး ?
Ma Ma ကိုယ့်အတွက်တော့ သင်တန်းတက်ဖြစ်တာက ရွာမဝင်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်မယ်။ ကျန်တာကတော့ ထုုံးစံအတိုင်း ကိုးနတ်ရှင်ကြောင့်ပေ့ါ။
ခင် ဇော် ရွာ မဝင်ဖြစ်တာ ကို အပြစ်မတင်ပါဘူးး ချစ်မရေ.. ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ ကိုယ်တွေချည်းးမို့ပါ..
Mhee ၂၀၁၂ဆို အမ ရွာထဲ စြပြီး မဝင်ဖြစ်တော့တဲ့ အချိန်ပဲ။ ၂၀၁၂အစမှာ သာမီးတော်လေးမွေးဖို့ ပြည်တော်ပြန်ရောက်ချိန်။ ရွာထဲမှာ ပညာရှင်တွေများတယ်။ နောက် မန့်တွေမှာဆို မဖြစ်မနေ ဖတ်သင့်တဲ့လူတွေရှိတယ် ာပညာစုံတယ် လူစုံတယ်။ ရွာထဲမှာ စာရေးမယ် စာရေးမယ် စိတ်ကူး ပဲရှိတယ် လက်တွေ့ မဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အတွေးရတနြ်း စာအုပ်ထဲ ချရေးထားဖြစ်တယ် လက်တွေ့ ကွန်ပြူတာရှေ့ မထိုင်ဖြသ်ဘူး အဲ့ စာတွေ များနြေပြီ။ အစ်မ အစ်ကိုကြီးကဆို စာရေးပါ စာရေးပါနဲ့ အမြဲ လှမ်းပြောတယ်။ စာရေးဆရာတွေ ရေးချင်ရင်တောင် လပိုင်းလောက်ပဲလာလို့ရမယ် နင်က ကြာကြီး ရေးစရာ အများကြီးရေးပါ။ နင့်အတွက် နေ့စဉ်ကြုရလို့ ရိုးနေပေမဲ့ ငါတို့အတွက် ဗဟု သုတတွေတဲ့ ဇီရ တိုက်တွန်းနေတာ။ ဟုတ်တယ် ရေးမယ်ပေါ့ ြပြီးတော့ မရေးဖြစ် မဝင်ဖြစ်ဘူးဖ ။ အပျင်းစိတ်ကို နိုင်ယူြပြီး လာနိုင်အောင်ကြိုးစးလိုက်ဦးမယ်
Kaung Kin Pyar မမှီရဲ့ စာတွေကို အားပေးနေကျ၊ အတုယူနေရတာပါ…
ခင် ဇော် ရသ ပိုင်းး ထဲ မမှီက ထိပ်ဆုံးး ကပါဗျာာ .. ရေးးတာ မဖတ်ဖူးသေးးခင်မှာ ကို အရင် ကြားးဖူးးခဲ့တာပါ ???
Alinsett မမမှီ(ညီမတော်ရော နေကောင်းလား)
ရေးပြီးသားစာမျက်နှာကို စကမ်ဖတ်ပြီး ပုံအဖြစ်နဲ့ပို့ပေးလေ။
အနော် စာစီပြီး ရွာထဲ တင်ပေးမယ်။ မမမှီ နာမည်နဲ့ မမမှီအကောင့်ထဲကပဲ တင်မှာပါ။ M G ပါတ်စ်ဝါ့ ပြောပြရန်မလို။ ပွိုင့်ကလည်း မမမှီအကောင့်ထဲသာ ရောက်မည်။မမမှီ ညီမတော် မျက်နှာကြောင့် အဲလေ ဟုတ်ပေါင် မမမှီ စာတွေ ဖတ်ခွင့်ရချင်တာကြောင့် ကူတယ်မှတ်
Mhee ဓာတ်ပုံတွေ ပို့ပေးမယ် တင်ပေးလို့ရမလား အစက ဇီကို အကူ အညီတောင်းမလို့ အားနာလို့။။ ြပြီးမှ အဲ့ပို့မှာ စာဝင်ရေးရင်ရမလား။ ပါလီမန်ရယ် ကျုးလစ်ရယ် တင်ချင်တာ အိမ်ကြီးရှင်က လုံးဝ မအားလို့ သူ့ အကူအညီ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အကြွေးတွေ ဖြတ်ချင်နေတာ ။ သံအမတ် အသစ်လာရင် အခြေအနေက မအားရင် မတင်ဖြစ်တော့မှာဆိုးတာ။ ညီမတော်လည်း အလုပ်နားထားတာ ခု အလုပ်ပြန်ဝင်ြပြီဆိုတော့ ရွာထဲ ပြန်ရောက်နေမယ်ထင်တယ်။ သူလည်း စာရေးရင် သိပ်မဆိုးလှဘူး ရေးဖို့ တွန်းအားပေးနေတယ်။
Kaung Kin Pyar မမှီစာဆို ညီမလဲ ကူပေးပါ့မယ်..
ရေးထားတာတွေရှိရင် ဆုဆီလဲ ခွဲပေးလို့ရတယ်နော်.
ပြီးသွားရင် မမှီအကောင့်နဲ့တင်ဖို့ အလင်းဆက်ဆီ ပေးထားလိုက်မယ်… ??
Alinsett ကျနော်က အားတဲ့အချိန် စာစီပေးလို့ ရတယ်။ တင်ဖို့ကလည်း အားတဲ့အချိန် ရုံးက ဝိုင်ဖိုင်နဲ့ ဖရီး တင်ပေးလို့ရတယ်။ မမှီ အကောင့်ကို မထိပဲ မမှီနာမည်တပ် တင်ပေးလိုက်ရုံ။ ဆိုတော့ ကောင်းကင်ပြာမမနဲ့ ကျနော် တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ တစ်ယောက်တလက် ကူ တင်ပေးမယ်လေ။ မမှီ လက်ရာက တကယ် ဖတ်ချင်စရာတွေမို့ . . ဖတ်ကြရစေချင်။
ဒါနဲ့ ညီမတော်က ပို စာရေးကောင်းသလိုပဲ နော့။ …
Kaung Kin Pyar ဟပ်… ဟပ်…. ဟပ်ချိုး!!!
ငါရိုက်ပြီး စတစ်နဲ့ ပေးလတ်မယ်....
Alinsett ဒါရှို စာစီဖို့ ကကပ တာဝန်ယူ။ ပိုစ့်တင်ဖို့ အနော် တာဝန်ယူမယ်။ ပိုစ့်ထဲ ထည့်မယ့်ပုံတွေ ဘာတွေကိုတော့ JPEG နဲ့ alinsett.art@gmail.com ထဲ တွဲ ပို့ပေးပေါ့နော။
ပုံတွေထဲ ညီမတော်ရဲ့ပုံ ထည့်မပို့ဘူး မဟုတ်လားလို့ မမေးပါဘူး။ …
စကားမစပ် မမှီ လက်ရေးက ဆရာမောင်စွမ်းရည်လောက်တော့ ဖတ်ရ မခက်ဘူးထင့်။
လက်ရေးစာမူကို စာစီရမယ့် ဆုမမကို ဆရာမောင်စွမ်းရည် လက်ရေးစာမူတစ်ခုလောက် ပြပြီး စာစီစေ့ချင်ထာ။
Mhee တခါ စာကူရိုက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အိမ်ကြီးရှင်တော့ ဘာတွေ ရေးထားမှန်းကို မသိဘူးတဲ့။ စာကတော့ ရပါတယ် တခါတလေ စာရိုက်ရင်း ထပ်တိုးတာတို့ ပြင်တာတို့ရှိတော့ ကိုယ့်ဖာသာပဲ အဆင်ပြေမှာ။ ဓါတ်ပုံတွေသာ ပို့လိုက်တယ်။ အားမှ ခုတော့ အဝတ်လျှော်ထားလို့ အဝတ်လျှော်ခန်း ဆင်းလိုက်ဦးမယ်။ အဝတ်ဆင်းလျှော်ရတာလည်း ရေးရင် စာတပုဒ်ရနိုင်တယ်။
ရွာထဲမှာ မိုင်းသွားထောင်ပေးရမလား ပြော
ခင် ဇော် ဟယ်.. ယောက်ခမ မိုင်းး ဆိုရင်တော့ နင်းးရချည်သေးးရဲ့.. ????
Padonmar FB ကလွယ်ပေမယ့် ရွာထဲကလို အသေအကြေ ဆွေးနွေးရမယ့် မန့်တွေနည်းတာကြောင့် အားမရပါ။ ရွာကျတော့လည်း တခါဝင်ဖို့ အဝိုင်းလည်နေတာနဲ့ သော့တောင်ပျောက်ပါပေါ့။
Surmi အခုနောက်ပိုင်း ဖုန်းနဲ့ဝင်တာလွယ်တော့လွယ်သွားပါပြီ ..
ဒါပေမယ့် လူမစုံတော့ ပျင်းစရာဖြစ်သွားတာပါ
Sorrow ဟော့ဒမာ….ကျွဲကောတွေရမယ် …ဒေါင်းဥတွေရမယ်….ပျားလိမ္မော်တွေရမယ် ….
ခင် ဇော် ၃ မျိုးးထဲလားးး
Sorrow ဘယ်သူတုန်းဗျ သင်္ဘောသီးက..မသိလိုက်ဘူး ကျန်း….အဟီဟီ
ခင် ဇော် ငင့်.. ရှာမလားးလို့ စ ဒါ ဘာာာ ?
Thakhin Kai Bwor ရွာစည်သွားအောင်..” ငွေနဲ့စာလုံးလဲလှယ်စနစ်- မတူသောအတွေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာချရေးပါ” ကို.. ကြော်ငြာထည့်လိုက်ရမလား တွေးနေတယ်..။
မြန်မာပြည်မယ်.. မြန်မာ့ဂဇက်ကို ပုံနှိပ်ဖြန့်ချီဖို့..။ …
Aung Kyuu သန်ဆင်ခိုင်မ်လေး ကြောင်ပိုက်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးပုံဆိုရင် အဲဒီလ စပွန်ဆာပေးမည် အူးမာမွပ်
ခင် ဇော် လာချင်တဲ့သူ ရောက်အောင် လာလိမ့်မဗျာ..
မလာချင်ရင်တော့ အကြောင်းပြချက်တွေ အများကြီးပါ့..
လာရေးဖို့လည်း ကြိုးစားရသေးးဆို ကိုခိုင် ၂ ခါနာ ဖစ်နေမယ်.. ???
ပုံနှိပ်ဖို့ကိုသာ အားးပေးးပါတယ်.. ??
Aung Kyuu အောပုံနဲ့စာ များများထည့် တလစောင်ရေ တသိမ်း အာမခံတယ်
ခင် ဇော် နိ သတင်းစာ မှ အော ထုတ်တော့ ကြောင် … ??
Aung Kyuu ဒါမှမှုတ် ဘိလိပ်စာနဲ့ နေ့စဉ်ဈေးနှုန်း အသစ်ရောက်မရောက် အဲဒါတွေထည့်… နှစ်သိမ်း အာမခံတယ်
Alinsett ရွာထဲ ဝင်ရတာ ကျနော့်အတွက်တော့ မခက်ရေးချ မခက်ပါ။ အူရီဒူး နက်လိုင်းနဲ့။ တစ်သိန်းတစ်သောင်းကျော်တန် ဟန်းစက်(vivo-Y15)လေးနဲ့ ဝင်နေတာ။ အဆင်ကို ပြေ. . .လို့။ ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့ ဟန်းစက်တွေနဲ့ဆို ပို လွယ်မယ်ထင့်။ မလာဖြစ်ကြသူတွေကတော့ .
Padonmar တီဒုံက ဖုန်းနဲ့ စာအရှည်ကြီးမရိုက်နိုင်ဘူး။အခု စာရှည်ဆို ကွန်ပူတာနဲ့ ရိုက်တာချည်းပဲ။ဖုန်းနဲ့က သိပ်ပင်ပန်းတယ် အဖွာဂျီးတွက်။ကွန်ပူတာ က ရွာဝင်မရ။
Alinsett တီဒုံ့ ကွန်ပူတာက ရွာ ဝင်မရဘူး? ဘီလို ဖြစ်လို့ပါလိမ့်။ အနော်တော့ ရုံးရောက်လို့ ဝိုင်ဖိုင်ရပြီဆိုတာနဲ့ ကွန်ပူတာနဲ့ဝင်ထားတယ်။ ဘတ်စ်ကားပေါ်တို့ အိပ်ရာထဲ မအိပ်ခင်တို့မှာတော့မှာတော့ ဖုန်းနဲ့ဝင်တယ်။
ဖုန်းနဲ့ စာရေးတာက ကျနော့်အတွက်တော့ ပို အဆင်ပြေတယ်။ သတိရလိုက် note ဖိုင်လေး ဖွင့်ပြီး ရေးလိုက်နဲ့။ ပြီးပြီဆိုမှ ကော်ပီယူပြီး ရွာထဲဝင် paste လုပ်တာ။
Padonmar ပြောရရင် အရှည်ကြီး။ ကွန်ပူတာက Kaspersky ကြောင့်လားမသိ အရမ်းလေးတယ်။ fibre optic က ကိုယ်သုံးတဲ့ ညဆို ပျက်တတ်တယ်။ ရွာက ဖတ်လို့ရတယ်။ log in ဝင်ရင် လည်နေတာ ကြာတော့ password မေ့သွားရော ။ password forgot လုပ်ရင် တခါ လည်နေပြန်ရော ။ စာက ကွန်ပူတာမှာရိုက် ။အဖွာဂျီးဒုက္ခ။
Sumi စာအုပ်ဆိုတာထက် မဂ္ဂဇင်းပုံစံမျိုးဆိုပိုကောင်းမယ်ထင်မိ။
ကြော်ငြာနဲ့ပိုက်ဆံရှာ ၊ စာမျိုးစုံလည်း ဖော်ပြခွင့်ရ၊ ဝါစဉ်ရှိပရိုဆရာများလည်း စာမူတောင်းပြီးထည့်ပေး၊ ကလောင်သစ်အနေနဲ့ ရွာထဲက စာတွေထဲက သဂျီးအကြိုက်ရွေးပြီးတစ်လ နှစ်ပုဒ်ဖော်ပြ ၊ ဒါဆို အတော်လေး ဟုတ်သလိုလိုရှိပြီ ။
ဒီနေရာမှာ ရွာထဲကစာမူရွေးတာကို အယ်ဒီတာစိတ်ကြိုက်သာရွေးခွင့်ရှိသမို့ မည်သူမှ ငါ့ဟာရွေးခြင်းမရွေးခြင်း အငြင်းပါွးစိတ်ကောက်စရာမလို ။
သဂျီးပိုက်ဆံနဲ့သဂျီးထုတ်တာဖြစ်လို့ မကြေနပ်ရင်ကြိတ်ခံ ။
မဂ္ဂဇင်စာမူတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ အရင်ဖတ်ခွင့်ရှိသမို့ ရွာထဲလည်းကြော်ငြာသလိုဖြစ်၊ တဖက်ကလည်း မဂ္ဂဇင်းကို ရွာကနေပုံဖော်နေတာဖြစ်လို့ ကြော်ငြာပြီးသားဖြစ်။
ကလောင်သွေးခြင်သူများလည်း ရွာထဲမှာလက်ရည်စမ်းခွင့် ပြသခွင့်ရ၊
အဲ့ဒီတော့ သဂျီးစဉ်းစားပါလေ …
Alinsett မဂ္ဂဇင်း အနေနဲ့တစ်လ တစ်ခါ ထုတ်ဖို့ အဆိုတင်သွင်းမှုကို သဘူတောပါကြောင်း။
တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့။ မဂ္ဂဇင်း ဆိုရငိတော့ ပုံနှိပ်/ထုတ်ဝေစရိတ် ပိုများမယ်ထင်တယ်။ သတင်းစာလို ဖရီး မဝေနိုင်ရင် ဈေးကွက် ရှာ ထိုးဖောက် ဝင်ရမှာ။ မဂ္ဂဇင်းကိုမှ စရိတ်စက အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် စာရွက်သားကအစ ချွေတာ ထုတ်ပြီး ဖရီးဝေ ရင်ကော, (ဥပမာ ဆရာမဂျူးရဲ့စာအုပ် စာရွက်သားတွေလိုမျိုး။ ရီဆိုင်ကယ်ပြန်လုပ်ထားတဲ့ စာရွက်သားဆိုလား။ အဲ့ဒါနဲ့ ဂျူးအန်တီ ထုတ်နေတာ စာမျက်နှာ လေးရာလောက်ရှိတဲ့ ဝတ္ထုတစ်အုပ်ကိုမှ ဆိုင်တင်ရောင်းဈေး သုံးထောင် မကျော်။ စာမျက်နှာ ၁၅ဝ လောက် တခြားဝတ္ထုစာအုပ်တွေက သုံးထောင်ကျော်ချင် ကျော်နေတာ။)
နောက်တစ်ချက်က ကလောင်သစ်တွေလည်း လက်သွေးခွင့်ရမယ့်ကဏ္ဍ ပါသွားရင် ဦးဝင်းငြိမ်းရဲ့ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်းလို ဖြစ်သွားမှာ။ ဆိုတော့ တခြာကဏ္ဍတွေလည်း အစုံပလုံပါမယ်ဆိုရင် နယ်ပယ်က ကျယ်သွားပြီး ရွှေလောက် တန်းဝင်အောင် ချီတက်နိုင်ရဲ့။
အဲ့လောက် ဖြစ်သွားရင်တော့ ဖရီးက မပေးနိုင်ဖို့က သေချာသလောက်။
အို သတင်းစာပဲ အရင် ထုတ်ကြည့်ပါအုန်း။ သတင်းစာနဲ့ အဆင်ပြေတော့လည်း ဆက်လက်ချီတက်လို့ ရသပေါ့။
သူကြီး ပြောပုံအရဆို သတင်းစာက မြန်မာပြည်တွင်းတင်မဟုတ် ဂျပန်ရောက် မြန်မာတွေဆီအထိ ရောက်အောင် လုပ်မယ်ဆိုလားးး။
Surmi ဒီလိုရှိတယ် .. အလင်းဆက်ရဲ့
မဂ္ဂဇင်းမှာ စာရွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်မှ ကြော်ငြာရနိုင်မယ်.
ကြော်ငြာရမှ ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါးရပေမပေါ့ …
ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါး ရမှ သားကျွေးမှုမယာကျွေးမှု မဂ္ဂဇင်းစာရိတ်တွေရမှာပေါ့ .. မင့်ပြောသလိုစာရွက်စုတ်နဲ့ဆိုရင် ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်က ကြော်ငြာထည့်ပါ့မလဲ ..
ာပြည်မှအလကားဝေဖို့မစဉ်းစားလေနဲ့ ။ ဒီကကောင်တွေအမားစုက ပိုက်ဆံပေးရမှတန်ဖိုးထားတတ်တာ …
နောက်တစ်ခုက အလကားပေးတယ်ဆိုရင် ကြော်ငြာခ ပိုက်ဆံ တောင်းရတာ နဲပေမပေါ့ …
ပြီးတော့ ဆရာကြီးတွေက်ုစာမူခပေးရမှာလည်းရှိသေးဆိုတော့ ….
ပြောချင်တာကတော့ စီးပွားဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုရင် စရိတ်စကမခိုဘဲ သင့်တော်တဲ့ပမာဏက်ို ရင်းနှီးပြုမှသာအောင်မြင်နိုင်မယ်ယူဆပါကြောင်းးး
ကျုပ်လက်ကိုင်ထားတဲ့ စကားကတော့ ” ကပ်စီးနဲရင် နှစ်ခါပိုကုန်တယ် “” လို့ သာ
Wintpyone Myint သတင်းစာ ထုတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင် အလျား အနံ ဆိုက်ကလေး ပြောပြပါလား။ အော့ဖ်စက် ရမရ မေးကြည့်ချင်လို့ပါ 
ရန်ကုန်ဈေးမေးပြီးပြီ..။ ယူအက်စ်ထက် နည်းနည်းများတယ်.။
ရွာသူားတွေများ.. ပုံနှိပ်စက်အသိရှိရင်.. စာမျက်နှာ ၃၂၊ ၁၆ ကာလာ၊ ၁၆ ဖြူမဲ ရဲ့ ၁၀၀၀၊ ၅၀၀ဝ ထုတ်ဈေးကို Chat ကနေပြောစေလို..။သတင်းစာကိုအခမဲ့ဝေပေးတာကိုတော့ မလျှော့ စွဲကိုင်ထားမယ်ဖြစ်ကြောင်း..။
ငြ်းခုန်ခြင်း အနုပညာ နဲ့ အငြင်းသန်တဲ့ အကျင့် ရွာထဲက ရတယ်
ကိစ္စ အတော်များများကို ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ ကြည့်တတ်လာတယ်
တွေ့သမျှမှာ ဝင်ပြောရင်း confidence ပိုရှိလာတယ်
ရွာသားဟူသည် ခေသူမဟုတ် ဆိုတာပါ သိလာရော
ငါ့ထက် ဘုကန့်လန့် နိုင်တဲသူတွေ အများကြီးဟ ဆိုတာပါ သိသွားတယ်
ခင် ဇော် ဂွဇာ တဂျားး ??
MisterMar Ga ရွာနဲ့ကျ အဆင်ပြေတယ်
Wintpyone Myint တစ်ရွာလုံး စူ့ထက်စူ လူစွမ်းကောင်းချည်းပဲ အဟုတ်။ 
Kwee Sone ဖတ်ကြည့်တာ အတော်လွမ်းသွားပြီ
Comment မှာ ဘပု ရေးတာကို စောင့်ကြည့်ရသူ တျောက်ပါ :'( . . .
Surmi ဘာရယ်မဟုတ် .. မနေ့ညက ရွာထဲဝင်ကြည့်တာ မျောက်လုံးတောင်ပြူးးးစ် သွားတယ် …
ကိုယ်က မိုင်းလေးဘာလေးထောင်မလားဆိုပြီး အကွက်သွားချောင်းပါတယ် ဟိုမှာက မပြုံးရဲ့ ကလပ်စကာဗုံးက ပေါက်ကွဲပြီးနေဘီ
ဂျီးဝါးက ဓမ္မာရုံဆောက်ဖို့အလှူခံပို့စ်တင်ထားတယ် ၊ မပြုံးက လှူရေးတန်းရေးနဲ့ ဘာသာရေးပိုင်းကို ဆော်ပလော်တီးထားတယ် ..
ဂျီးဝါးတော့ ကံခေပြီထင်ပါ့ ….
ဒါနဲ့ဘဲ ကြောက်ကြောက်နဲ့ပြန်ထွက်ပြေးလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းးးး ….
သေခြာတာကတော့ မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်း ရာသီဥတု ( အင်တာနက်လိုင်းကောင်း / လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကောင်း ) ကောင်းကြရင်ဖြင့် ရွာထဲမှာ ငြင်းခုန်ပွဲတွေများ ပြန်ပေါ်လာလေမလားးး ထင်မိ
ခင် ဇော် ဘာသာရေးကို ဓါးထမ်းးပြောကြပါဇို့ ဆိုနေမှ ??
Surmi ရွာထဲ ဝင်မပြောရဲလို့ဒီကဘဲ မြှောက်ပေးနေတော့မယ် … ဟိုင်းးးယားးး !!
Wow စမီးသွားရန်စထားတယ် ??
ဦးကျောက်ခဲ ကိုယ်တွေကတော့ ရှင်းတယ် ၊ အာရုံမလာလို့ “မရေးသေးတာ” ။ နိစ္စဓူဝ အလုပ်ထဲမှာ အောက်ကလူ အထာမကျရင်ကော ၊ အထက်လူ နှုတ်လှန်ထိုး ၊ Client နဲ့ ဖိုက်တင်ချရတဲ့ဘွ ၊ ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်း ရင်ထဲမထားတတ်သူမို့ အချစ်တော်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြရော ။ အခု တေတေနိတ်၏ …
တညင်သား အမေ နဲ့ရွာကို လွမ်းတယ် :'(
ခင် ဇော် ???
Swal Taw Ywet အင်းးး
သူကြီးကတော် ကို ယောက္ခမ ခေါ်နေကြတာဘဲရှိသဗျ။
တညင်သား ရွာထဲ အမေ မရှိတာ သိတာပေါ့ ့ဆရာရယ် အမေ ဆိုတာက ကျွန်တော့် မိခင်လေ ရွာ ဆိုတာက မန်းဂဇက်
Surmi တစ်ချိန်တုန်းက . . .
ရွာရဲ့ ပထမ စာမျက်နှာမှာ (ဝဘ်ဆိုဒ် ပထမပေ့ချ်) မှာ ကိုယ့်စာမူတစ်ပုဒ်တင်ထားရင် ညပိုင်းလောက်ရောက်တာနဲ့ ဒုတိယစာမျက်နှာကိုရောက်သွားပါလေရော ။
ဆိုချင်တာက . . မနက်ပိုင်းကနေ ညပိုင်းလောက်အတွင်း စာမူ အပုဒ်ရေ ၃ဝ နီးပါး ဝင်ရေးကြတာကိုပါ ။
ဒီကြားထဲ တစ်ဦးကို တစ်နေ့အတွင်းနှစ်ပုဒ်ဘဲတင်ရမယ်လို့ ကန့်သပ်ထားရသေး ။
(တချို့ဆို တစ်နေ့ သုံးလေးပုဒ်လောက်တင်ကြလို့ )
ဝဘ်ဆိုဒ် စာမျက်နှာဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်ပို့စ်ကို အရင်ဖတ်ရမလဲလို့ ရွေးရတာအမော ။(အားလုံးက ဖတ်ချင်စရာဖြစ်နေ )
မှတ်မှတ်မိမိရီစရာအနေနဲ့ပြောရရင် . .
၂၀၁၁ ၂၀၁၂ ကာလဟာ အစည်ကားဆုံးဖြစ်လို့ ကွန့်မတ့်တွေရေးစာတွေဝင်ဖတ်နဲ့ ညနက်သန်းကောင်ကျော်အထိနေအိပ်ရေးတွေပျက်လို့ အိမ်ကဇနီးနဲ့တောင် ရန်ဖြစ်ရသေး ( အဲ့ဒီလိုကို ချစ်ခဲ့တာ )
အဲ့ဒီလို ပို့စ်တွေများလွန်းတော့ ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့စာမူလေးကို ၂၄ နာရီကျော်ရင် တတိယစာမျက်နှာလောက်မှာ ပြန်ရှာရတယ် ။
ဒါကြောင့်ထင်တယ် အဲ့ဒိတုန်းက စတစ်ကီပို့စ်တွေကို စကားနာထိုးကြတာ
အခုတော့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်တင်ရင် ပထမစာမျက်နှာကနေ ၁ဝ ရက်အတွင်း မရွေ့သမို့ အော်တိုငုတ်တုတ် “စတစ်ကီ”
တခါတလေ ကိုယ်ရေးဖူးတာလေး ပြန်ဖတ်မိရင် တွေးမိတာက ” အော် . . . ငါအတော်လေး ပေါ ခဲ့ဖူးပါလားးး လို့ ”
ကိုယ်ရေးဖူးသမျှတွေက ပေါက်ကရ ။
ဒါပေမယ့် . .
အဲ့ဒီရောဂါက အပြီးအပြတ်ပျောက်အောင် ကုလို့မရလေတော့ တစ်ခါတစ်လေ ပေါနေမိသေးဗျာ . . .
ခင် ဇော် ဟီးးး! ခု က လူဟောင်းဒေ အကုန်ကို မမြင်ရတာရယ် ??
Mon Mon စကားမစပ်… (တကယ်တော့ အတင်းစပ်တာပါ..) သဂျီး အခု အသစ်လုပ်ထားတဲ့ ဘေးက ကွန်မန့်ပို့စ် မကြိုက်ပုစ်.. အရင်က ပို့စ်ကို အသားပေးထားတာ.. ခုုက မန့်တဲ့သူကို အသားပေးထားတာ.. အဲ့တော့ နှစ်ပို့စ်တည်းကို လူအများကြီး မန့်လိုက်ရင် တစ်ခြားပို့စ်တွေ မမြင်ရတော့ပုစ်.. ဟိ ကိုယ်က တစ်ခါတစ်လေမှ ဝင်တာဆိုတော့ မကွန်ပလိန့်ချင်လို့စ်
Padonmar ပြန်ဖတ်ရင် ပေါတယ် မထင်ပါဘူး။ အသစ်ပြန်ခံစားရပြီး ပျော်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ ပျောက်ကုန်တာတော့ နှဧမျာမိတယ်။
Uncle Gyi ဘာပြောပြောရွာထဲကလူတွေကfbကလူ
Surmi တကယ်တမ်းပြောရရင် . .
ရွာမှာငြင်းကြတာနဲ့ လက်ရှိ fb မှာငြင်းကြတာ မတူဘူး ။
ရွာထဲမှာက အားလုံးယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးငြင်းခုံကြတာ ။
အဆဲ ၊ အစောင်း ၊ အရွဲ့ တွေမပါဘူးဗျ ။
တခါတစ်လေ 10 ရက်လောက်ဆက်တိုက်ငြင်းခုံနေကြတာကို တွေ့ဖူးသေး ။
အကြောင်းအရာနဲ့ အတွေးအမြင်ကိုဘဲမူတည်ငြင်းတော့ အခြားပါစင်နယ်တွေမပါကြဘူး။
ပြောရရင် ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်တစ်ခုကိုထိမ်းသိမ်းတယ်ဘဲဆိုရမလားပေါ့့။
အကယ်၍ ခတ်ရိုင်းရိုင်းတုန့်ပြန်တယ်ဆိုရင်လည်း မျက်နှာတွေလူတွေဘ
်သူမှန်းမသိပေမယ့် အဲ့ဒီအကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့ မေရင်းထိုင်ရင်း ငုတ်သွားတော့တာ ။
အဲ့ဒီတုန်းက အငြင်းအခုန်စပယ်ရှယ်လစ်ကတော့ ဦးဖေါ ပေါ့လေ
ခင် ဇော် ရွာက လူတွေက အောက်လုံးထိုးတတ်သူ နည်းတယ်ဗျ! အဆင့် တစ်ခု ကို ထိန်းးထားဒယ်! အူးဆာပြောသလိုပဲ ?????
Ma Ma ရန်ဖြစ် ရင်တောင်ကိုယ့်ရွာထဲကလူမှ လက်ရည်တူတယ် . . . . ဆိုတာလေး အကြိုက်ဆုံးပဲ ?
ခင် ဇော် ချစ်မမ ဟိုက်လိုက်လုပ်ပီယေ ???
ရွာစားကျော်မငိးနန္ဒာ အပိုမပြောတော့ဘူး မိန်းမကတောင် မန်းဂဇက်ကို သူ့ထက် ပိုဂရုစိုက်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံခဲ့ရဖူးပါကြောင်း
Mon Mon ရွာထဲ ပြန်ဝင်ချင်စိတ် ပေါက်လာသလိုလို..
တကယ်တော့ မမဂျီးပြောသလိုပဲ.. ပို့စ်တွေကိုရော မန့်တွေကိုရော သေချာလိုက်ဖတ်မှ ဝင်မန့်ရဲ ပြောရဲတာ ဆိုတော့.. ဘယ်ကဘယ်လို စာဖတ်ပျင်းသွားမှန်းမသိတဲ့အချိန် ရွာထဲ မဝင်ဖြစ်တော့တာ..
ရွာက ဘာမှဖြစ်တာမီဟုတ်.. ကိုယ်က စာရေး စာဖတ် ပျင်းသွားတာ. နာဟဲ့ ငပျင်း
Darli May Aye အဲဒါကြောင့်ပါ ချစ်နေရတာ ခင်ဇော့်ကို။ မှန်ပါ့ ပျော်စရာကောင်းပြီး မေ့မရတဲ ့ဂေဇက်ပါ။
ဂျက်စပဲရိုး ရွာထဲ စာဝင်ဖတ်တယ်။
ငြင်းချင်တာ တွေ့ရင် ကောမန့်ရေးမဟဲ့ ဆိုပြီး အစပြုတယ်။
ပြီးတော့ ဟယ် ငါ စကားများနေရဦးမယ်လေ ဆိုပြီး ပြန်ဖျက်တယ်။
ခင် ဇော် နာ က ဘူ နဲ့ မှ ရန်မဖစ်ချင်ဖု! ဟိ ???
ဂျက်စပဲရိုး ရန်ဖစ်တယ် ဆိုတဲ့ အဆင့်ထိ မရောက်ပါဘူးလေ။
ဆွေးနွေး နှီးနှော ဖလှယ် တယ် ဆိုပါစို့ း)
ခင် ဇော် ငါ့ စကားနွားရ ပြောတာတို့
ဖင်ပိတ် ငြင်းချင်တာလေးတို့ပဲ လျှော့နေရဒေ ?
MisterMar Ga ခုက သတ်​လို့သိပ်​မ​ကောင်းတော့ဘူး :p
(ပွဲသွင်းမယ့်သူတွေ သိပ်​မလှုပ်တော့လို့လည်းဖြစ်​မယ် ?? )
Surmi ပွဲသွင်းနေကျလူတွေကိုယ်တိုင် ပ်ုလီယိုဖြစ်နေလို့
နန်းတော်ရာသူ ရွာဝင်စ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုတဲ့ ကပေနဲ့ကထူးဆန်း
ရောက်ရောက်ချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်း လန့်ပြေးချင်စိတ်ပေါ်မိတဲ့ အဘဖော
စာရေးဖို့ ကုန်ကြမ်းပေးတဲ့ အူးဆာ
တို့ကို မမေ့ပါ ?
Surmi ဖွဘုတ်က အငြ်းအခုန်တွေဖတ်ရတာအရသာမရှိဘူး ။
အဲ့ဒါဟာလဲ ရွာအစွဲ ဘဲထင်ပါ့
MisterMar Ga ဖဘမှာက ငြင်းတောင် မငြင်းရ​သေးဘူး လမ်းကြောင်းက စ လွဲနေပြီ :p
ခင် ဇော် ကျော် ဟာ ရွာ အုစာစောင့် တစ်ယောက်ပါ ???
MisterMar Ga ခုများတော့
အန်ဖောလိုး ဂါထာတွေ၊ အန်​ဖရန့် လက်​နက်​ပုန်းတွေ ဘ​လော့ သိုင်းတွေနဲ့
နန်းတော်ရာသူ အပြင်ကလူတွေ ဘယ်လောက်တော်ပါတယ်ပြောပြော ရွာထဲကလူတွေလောက်တော်တယ်မထင်တဲ့ အကျင့်ဆိုး?
အပြင်က ဘယ်လောက်တော်တဲ့လူနဲ့ငြင်းငြင်း ရွာကလူဘက်ကထောက်ခံချင်တဲ့ အကျင့်ဆိုး ???
ခင် ဇော် ပြင်ဘူးးပြင်ဘူးး! ??????
Surmi ဒါဆို ဒီပို့စ်နှစ်ခုလုံးရောကွန်မန့်တွေရော ရွာထဲသိမ်းလိုက်တော့လေ
ခင် ဇော် စိတ်ချ! သိမ်းမှာ! အကြံရှိဒေ! အပြင်ရောက်နေလို့ ယောက်ခမရေ ??
Chat list ထင်တယ်နော်
စတေးတပ်နဲ့ သူ့အောက်က ကော်မန့် တွေပါ ညီမရေ။
အင်း…. မြန်မာပြည်ပြန်.. သတင်းစာထုတ်နေတာတောင်.. ၁နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း..။
ရွာသူားတွေနဲ့ သိရခင်ရတာ ဘဝမှာ တော်တေ်ာလေး အမှတ်တရကျန်ရစ်တာပဲလို့..။
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ သတင်းစာ ထုတ်ပြီဆိုမှပဲ တစ်နှစ်ပြည့်တာတောင် တစ်စောင်မှ လက်ထဲ မရောက် မဖတ်ရတော့တာလည်း နည်းနည်းနောနော အရှုံး မဟုတ်။
ဘယ်နားမှာ ထုတ်ပြီး ဘယ်နားတွေမှာ ဖြန့်နေလဲ မသိရေးချ မသိ
ဪ ပြန်ရောက်ပြီး တစ်နှစ်တောင်ပြည့်သွားတာတောင် မသိလိုက်ပါလာူ…
မြန်မာပြည်ပြန်ထုတ်တဲ့ သတင်းစာလည်း တခါမှ မမြင်ဖူးသေး။
ဖြန့်ပုံက.. လူတွေထဲဆိုတာထက်.. အဲလို.. လွှတ်တော်။ဝန်ကြီးဌာနတွေဆီ..
အခုတလော အရင်က စာတွေမန့်တွေ ပြန်မြင်မိတျုင်း
alinsett ကို ဆော်ပလော်တီးချင်နေတယ်
အခုတလော အရင်က စာတွေမန့်တွေ ပြန်မြင်မိတိုင်း
alinsett ဆိုတဲ့ချာတိတ်ကို ဆော်ပလော်တီးချင်နေတယ်
တစ်ခါပဲ တီးရင် ရပါပြီ။
တစ်ခါက . .
အရင်က ကပတ နဲ့လိုင်းသူုံးရတဲ့ခေတ်မို့ရွာထဲပဲပတ်စရာရှိ
ခုကျ FB က ဖုန်းနဲ့သိပ်လွယ်နေတာဆိုတော့
ချစ်မွအိ ရဲ့ မန့်လေးတွေ ကြိုကြား တွေ့မိပါ့
အမလေး ရွာထဲကို လုံချည်ကွင်းသိုင်းပြီး မနည်းဝင်လာရတယ် လမ်းပျောက်နေလို့
ခု လုံချည် ပြန်ဝတ်ပါတော့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် … တို့များ တက်ညီလက်ညီ ပြန်ဝိုင်းရင်…
အရင်လို စည်ကားနိုင်ကောင်းပါရဲ့ …
ဂဇက်က လူကြီး ကစားကွင်း ၊ ဦးနှောက်တွေ လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းတဲ့နေရာ…
တစ်ယောက် တစ်လက် ဝိုင်းရင် ရတယ်။
မန်းရှင်းခေါ်ထားတာလဲမလာ . .
ရွာသူားတွေတက်ကြွနေပြန်တော့သူက ဘယ်ပျောက်နေတယ်မသိ ။
သူ့စိတ်ထင် သူရွာကြီးပျက်ပြီး မီးလောင်သွားပြီထင်နေတယ်မှတ်တယ် . . .
နေဦး . .
ဟိုဖက်က နာမည်နဲ့ ဒီဖက်က နာမည်ကို ပြန်ချိတ်ဆက်ထားရတာ အတော် အလုပ်ရှုပ်မှာ။
ဇီဇီကလေး သနားလို့ သော့ရှာပြီး ပြန်ဝင်တာ ၊
သဂျီးအိမ် မီးဒုတ်နဲ့ ရှို့မှ။
ပြောသာပြောရ..သူလည်း ကျူးဖြစ်နေလို့ ပြေးနေရလား၊
ဟုတ်တယ် တီဒုံရေ။ နာမည်တွေ အပြောင်းကြောင့် ကော်ပီ ပေ့(စ) ကိုပဲ မူးလို့။
ခု ပီစီနဲ့ ဝင်မှ ဒီမန့်တွေ တွေ့တယ်။
တဂျီးး က သူ့ကို “တ” အောင် လုပ်နေသလားပဲ။
တနာရီလောက်ကြာပြန်ဝင်တော့ ဘယ်သူမှလည်း မရှိ။
အမှန်တော့လည်း၊ဒို ့ရွာလေးကဒို ့ရွာလေးပါပဲ၊
ကိုယ့် ရွာ ဆိုတဲ့ အစွဲလေးနဲ့ ကြိုးပမ်းနေရတာ။
” Myo Myo ဒီနိုဝင်ဘာ ခွင့်ကအပြန် စလုံးဝင်လည်ဘို့ကိစ္စ
Visa free ကာလ ရှေ့နှစ်သို့ ရွှေ့မည်ဖြစ်ပါကြောင်းးးး။ ”
သိပ် နားမလည်လို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ Singapore ဝင်ဖို့ ၊
Visa on Arrival Status က ရပြီးသွားပြီ မဟုတ်လား ။
မနှစ်က ကော်မန့်ပါ ဘဖောရေ။
ကြုံလို့ ဒီနေရာလေးကနေဘဲ ပြောလိုက်ပါရစေ ။
သူဂျီးရေ တစ်ချို့ Post တွေ က ၊
ကျနော် ( တောင် ) Comment ဖတ်လို့ မရ ၊ ရေးလို့ မရ ဖြစ်နေတယ် ။
” ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပါပဲ ”
” သီးကင်းလေးတွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေ “
သဂျီးက ရွာပျက်ပြီဆိုပြီးအေးဆေးနေ နေတာ . . .
လူဆိုးအဖွဲ့လည်းဝင်လာရော သံချေးတက်နေတဲ့သူ့နှစ်လုံးပြူးးကြီး ပန်းဘဲဖိုပို့နေတယ်ထင်ပါ့
သူ ကိုယ်တိုင်တောင် ဘယ်ရောက်နေမှန်းကို မသိပါဘူးး
သတင်းစာ ထွက်ခါနီး သူ့ အရောင်ရင့်တို့ အာဘော်တို့ ရေးခါနီးလောက်မှ ဖွဘုတ်မှ ၂ ရက်လောက်မြင်ရတယ်။
အင်းးးး MG မှာ ကြိုးစားပြီး ပြန်ရေးကြည့်မလားလို့ ။
အဓိက ကိုယ် စိတ်ဝင်စားတာက ၂ ပိုင်း ရှိနေတယ် ၊
၁ ။ နိုင်ငံတကာ ဗဟုသုတ အတွေးအခေါ် တွေကို ဝေဘန် / ငြင်းခုံခြင်း နှင့် ၊
၂ ။ ( ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက် ဖြစ်နေတဲ့ ) ခရီးသွား ဆောင်းပါး ဘဲ ။
ဘာရေးရင် ကောင်းမလဲ ရွာသူားတို့ ။
လာမယ့် Oct & Nov မှာတော့ Dubai & Abu Dhabi ( UAE ) နှင့်
Dead Sea & Petra ဂျော်ဒန် သွားဖို့ ရှိတယ် ။ Tour Package ဝယ်ပြီးပြီ ။
လာမယ့် ၂၀၁၈ မှာတော့ အပျော်ရွှင်ဆုံး နိုင်ငံ ဆိုပြီး သိပ် နာမည်ကြီးလွန်းတဲ့ ၊
ဘူတန် နှင့် နီပေါ အတွဲ ကို သွားမယ် စဉ်းစားထားတယ် ။
ခရီးသွား ဆောင်းပါး ဘဲ ။
ခရီးတွေများကြီး မဟေသီနဲ့ ကမ္ဘာပတ်ပါရှင့်
စိတ်ပါတဲ့ အကြောင်းအရာကို စိတ်ရှိတုန်း ရေးရတဲ့ အရသာက ဘာနဲ့မှ မတူဘူးရယ်။
ခရီးစဉ်အကြောင်းတွေရေးပါခင်ဗျ….ဘဖောသွားတဲ့နေရာက …တကယ့်ကို မြန်မာခရီးသွားလောကအတွက်စိမ်းနေသေးတဲ့နေရာတွေဆိုတော့ကာ …Myanmar Travel Pro တွေတောင်တချို့နေရာက ရောက်ဖို့အလွန်မလွယ်….
ကိုယ်လဲ မကျန်ခဲ့ရလေအောင် မနဲကြိုးစားပြီး ဝင်ခဲ့ရတယ် ..
သံယောဇဉ်မကုန်လို့ တစ်ခါတစ်လေ ဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ..
ရွာ့ကျေးဇူးတွေက မနဲဘူး .. ဘဝမှာ အများကြီး အထောက်အပံ့ရခဲ့တယ် ..
မကြာမကြာ လာလည်ပါ့မယ် ..
ဝေ့ ကိုလည်း မကြာခန မြင်နေရတာ တော်သေးး
မနှစ်က.. သမ္မတကြီးအိုဘားမား.. အင်မီဂရေးရှင်းပေါ်လစီလက်ချက်နဲ့.. ရုံးက ဖိလစ်ပိနိုရဲ့ မိန်းမက.. အဖမ်းခံရပြီး.. ဒီပို့တေးရှင်း
ဆိုတော့.. ထရမ့်လည်းတက်လာရော.. မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီး.. အသက်၁ဝနှစ် အမေရိကန်ကလေးမနဲ့အတူ ဝန်ထမ်းဖိလစ်ပီနိုလဲ.. ပြည်တော်ပြန်သွားပါလေရော..။
အဲဒါ… သူနဲ့လုပ်ထားတဲ့.. မိုက်ခရိုဆော့ဆာဗာဒေတာဗေ့စ်ကြီးကို.. ပြန်အသက်သွင်း..နားလည်အောင်ပြန်လုပ်နဲ့.. အနိစ္စ…ဒုက္ခ..ဖြစ်နေလို့..။
အမေရိကား လဝကပေါ်လစီမှာ.. လူ့အခွင့်အရေး မရှိ..။
အမေလိကန် လဝက မှာတောင် လုခွင့်ရေးမချိမှတော့
ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ပဲ ရုပ်ရှင်လေး ထိုင်ကျိနေတာ အေးပါဒယ်။
ကော်မန် ့တွေ အမှတ်တရပြန်ဖြစ်နေပါလား။
ကျနော်တောင် မေ ့နေပြီ။
တော်တော်ရှာရှာဖွေဖွေ ပြန်စုနိုင်တဲ့အစ်မတော်
ဖွဘုတ်​မှာလူအ​တော်​စုံသကိုး လိုက်​ရှာကြည်​့အုံး မယ်​ တခါမှဝင်​မကြည်​့ရ​သေးဘူး။
အမှန်တော့ ဖဘကို စိတ်ကုန်နေတာ ကြာပြီ.. ဘာတွေမှန်းမသိ.. တစ်နေ့တစ်နေ့ မိန်းစထွင်းတွေလည်း မရိုးနိုင်… အာ့နဲ့ ရွာထဲမျက်စိပြန်လည်လာတာ.. ရွာမှာနေတာ စိတ်ချမ်းသာသလိုလို..
ရွာက အူနီကုဒ်နဲ့ထင်တယ်..ဖုန်းနဲ့ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေပုစ်.. အာ့နဲ့ ရုံးသွားရုံးပြန် လက်ပကျွပ်သယ်ဖြစ်နေပါရောလား
ရွာကိုများ အူနီကုဒ် တဲ့ ပြောရက်လိုက်တာ…
ငါတို့ သဂျီးက အကုန်ပြောင်းပြီးမှ သူလိုက်ပြောင်းမြှ
အဟိ… အာ့ဆို နာ့ဖုန်းက font ဘာဖြစ်လဲမသိဘူး..